အဆုံးအစမရှိ ကျယ်ဝန်းသော ဤ မဟာကမ္ဘာအပြားကြီးအား ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဆန္ဒတော်မပါဘဲ ဖြစ်ပျက်နေသောအရာဟူသည် ဤ စကြာဝဠာအပြားကြီးတွင် စိုးစဉ်းမျှမရှိပါချေ ။
ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် သိဒ္ဓတ္ထ သို့မဟုတ် အရှင်ဂေါဓမ သည်လည်းကောင်း ၊ ထာဝရ ဘုရားသခင် နှင့် သားတော် ယေရှုသည်လည်းကောင်း ၊ လူသားနှင့်အနီးဆုံး တမန်တော် မိုဟာမက်သည်လည်းကောင်း ၊ လူသားနှင့် အတူရှိနေတော်မူသော တမန်တော် ဟာဂျီဝက်စလီသည်လည်းကောင်း ၊ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏ ဆန္ဒတော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားတော်မူခဲ့သော နဗီ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ ဖြစ်တော်မူပါသည် ။ ထို့ပြင်တဝ ဤ ဘလော့ သည်လည်း အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဆန္ဒတော်နှင့်အညီ ထူထောင်ထားမူသော ဘလော့ ဖြစ်ပါသည် ။
သို့ပါ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏ ဖန်ဆင်းခံ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် (ဗုဒ္ဓအပါအဝင် တမန်တော် ဝက်စလီစသည်)တို့အား ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း ၊ အပြစ်ပြောဆိုခြင်းတို့သည် အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကို ဆဲဆိုခြင်းမြောက်ပါသဖြင့် ၊ ထိုသို့ ဆိုရေးတိုင်းထွာသူ မူဆလင်အပေါင်းတို့အား အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည် ကြီးလေးသော အပြစ်ကို မုချစီရင်တော်မူလတ္တံ့ ။ (မူဆလင်မှအပ အခြားဘာသာဝင်များမပါ ၊ အခြားဘာသာဝင်များဆဲဆိုလျင် ခွင့်လွတ်တော်မူသည်)
မော်ဒန် ကိုရမ်ကျမ်းမြတ် ၊ အခန်းကြီး ၁ ၊ အခန်းငယ် ၃ ၊ အပိုဒ် ၅ ။
၇၈၆ အန္တရာယ် ကြေငြာစာတမ်း
ဤစာစုကို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အကျိုး အတွက် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ကြည့်၍ရေးသားခဲ့ပါသည် မြန်မာ နိုင်...ငံတွင် နေ မြန်မာ့ရေကိုသောက် မြန်မာလူမျိုးကို မြန်မာ့မြေမှ ပပျောက်ရန် အတွင်းကြိတ် လျှို့ ဝှက် ကြံစည် နေကြသော မွတ်ဆလင်များ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်သိမြင်ကြပြီးအမျိုးဘာသာ သာသနာကိုတန် ဖိုး ထားတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် မျိုးချစ်စိတ်ဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်၏ ကိုယ်ခံအားပင်ဖြစ်ပါသည် တိုင်းပြည် တစ်ပြည် တွင် မျိုးချစ်စိတ်ဆိုသည့် ကိုယ်ခံအားမရှိပါက တိုင်ပြည်အတွက် အန္တရာယ်ကြီးလွန်းလှပါသည် ။ ယဉ် ကျေးမှုဆိုသည်မှာ လည်း တိုင်းပြည်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားပင်ဖြစ်ပါသည် မျိုးချစ်စိတ် နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပျက် သုဉ်း လာ ပါက ဖောက်လွဲ ဖောက်ပြန်ဖြစ်လာပါက တိုင်းပြည်ကို လက်လွှတ်ရပေလိမ့်မည် တိုင်းပြည်လက်မဲ့ သော လူမျိုးကို မည်သည့် နိုင်ငံကမှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနေမည် လေးစားနေမည်မဟုတ်ပါ မြန်မာမျိုးချစ် လူ ငယ် အပေါင်းသိကြစေ…မြန်မာ မိန်းမပျိုတို့ မျိုးချစ်စိတ်ဖြင့် မွတ်ဆလင်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ ။
မွတ်ဆလင်များသည် ယဉ်ကျေးမှု လျော့ရဲ လာသော ....မျိုးချစ်စိတ်မပြင်းထန်တော့ ပဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန် နေ ထိုင်လာသော မြန်မာများ ....အပေါ်တွင် အထူးတလည် စစ်ပြုနေစရာပင်မလိုတော့ပါ ။ အချိန်ကာလ အတိုင်း အတာ တစ်ခု ထိသာ စောင့်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင်များ၏ ခြေဖ၀ါးအောက် ရောက်ရ ပေတော့မည် ။ ငွေကြေးအရအောင်ပွဲခံလာနေသော မွတ်ဆလင်များသည် မြန်မာလူမျိုးများ အပေါ်တွင် ဘာသာ ရေး လူမျိုးရေး တင်စီးမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပင်….
အကျိူးလိုလို့ ညောင်ရေသွန်း ထောင်မြင်ရာစွန့် ဆိုသကဲ့သို့ မြန်မာလူမျိုးများ အပေါ် ခေတ္တခဏ စေတနာ ကောင်းပြနေခြင်းမှာ သူတို့ မွတ်ဆလင်များ အင်အားစုနေသော အချိန်ဖြစ်သော ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည် ။ အားနည်း နေသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည် ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရှိစာသင်ကျောင်းများတွင် ဘုရားစဉ်များ ရှိသည် ဟု သင်ထင်နေပါသလား? ကျောင်းမတတ်ခင် ဘုရား ရှိခိုးနေသည်ဟုတ်သင်ထင်နေပါသလား? သင်အမှား ကြီး မှားနေပေပြီ… ဘုရားစင်မရှိသလို မွတ်ဆလင်ကျောင်းသားများကြီးစိုးနေသော စာသင်ကျောင်းများဖြစ် သောကြောင့် ဘုရားရှိခိုးသံများလည်း တိုးတိတ်နေခဲ့သည်မှာကြာလှပါပေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံတွင်နေကာ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ဖျက်ဆီးနေခြင်း ၊ ငွေမက်သော အနုပညာရှင် ပေါက်စ များ တိုင်းသိပြည်သိ အနုပညာရှင်များကို ခေါ်ယူ အိပ်စက်ဖျက်ဆီးနေပြီး မွတ်ဆလင်များ က အောင်ပွဲ ခံနေနိုင်ခြင်းမှာ အမျိုးသားရေး ကိုယ်ခံအား မြန်မာပြည်သူ ပြည်သာများတွင်နည်းနေသောကြောင့် သာဖြစ်ပါသည်
စီးပွားရေးသမား မွတ်ဆလင်များ ၇၈၆ ဟု ပေါ်တင် မလုပ်ဝံ့ကြတော့သော်လည်း တိုင်းပြည်ကို သိမ်းပိုက်ရန် အလောသုံးဆယ် ကြံစည်နေကြပါသည် ။ တိုင်းပြည်စွန် တိုင်းပြည်ဖျားက ဘင်္ဂလားရှေ့်မူဆလင်များကို အမြဲမပြတ် သတိမူရမည်ဖြစ်သလို ရန်ကုန် မန္တ လေး မော်လမြိုင်တွင်လည်း မူဆလင်များက မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲကို ငွေကြေးလက်နက် ဖြင့် တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနေမှုများကိုလည်း သတိမူကြရပါမည် မွတ်ဆလင်တစ်အိမ်ကနေ.... မွတ်ဆလင်တစ်ရပ်ကွက် ...မွတ်ဆလင်တစ်ရပ်ကွက်ကနေ မွတ်ဆလင်မြို့ နယ် ၊ မွတ်ဆလင်ခရိုင် ၊ မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ထို့နောက် ခွဲထွက်ရေး တောင်းဆိုပါမည် ထိုအရာမှာ မွတ်ဆလင်များ ရွှေ့နေကြအကွက်များ ၊ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ လုပ်နေကြ အလုပ်ဖြစ်ပါသည်
မြန်မာလို ...မျိုးချစ်စိတ်လျော့နည်း လာသော ....တိုင်းပြည်မျိုးကို မဆိုထားနဲ့ ၊ အိန္ဒိယလို ......အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သည့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကိုပင် နှစ်တစ်ရာ့ ငါးဆယ်လောက် ဖြင့် အပျောက်ကြံနိုင်ပါသည် မယုံကြည်ပါက ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကိုလေ့လာနိုင်ပါသည် ခရူးဆိပ်စစ်ပွဲများ အကြောင်း အိန္ဒိယပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ် မွတ်ဆလင်များက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲများအကြောင်း အာဖဂန် နစ္စတန် တွင် တာလီဘန်များပြုမူခဲ့သည်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည် အစ္စလာမ်မစ် ဆိုတဲ့ ကောင်မျိုးတွေဟာယခင်လည်းမကောင်းဘူး....ယခုလည်းမကောင်းဘူး.....နောင်လည်းကောင်းလာမယ့် ကောင်မျိုးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အနေနဲ့ သတိကြီးကြီးထားရပါမယ် မွတ်ဆလင်မ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအခန့်သားကောင်းစားနေပါတယ် သူတို့တွေ လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးတွေကိုလည်း မြန်မာအမျိုးသားပိုင်လုပ်ငန်းလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ ထွေးရောယှက်တင် နေထိုင် ကြ ပါတယ် သို့ပေမယ် သူတို့ မူလဗီဇကိုတော့ ၀မ်းတွင်းမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ် ဒီမူဆလင်ဆိုတဲ့ ကောင်တွေ ဟာအလာဟ့် စကားကကလွဲရင် ဘယ်စကားကိုမှ နာခံတတ်တဲ့ ကောင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘုရားနားမှာ ကြက်သားကြော်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးလာကြော်ရောင်းနေပါတယ် ၇၈၆ တွေပါ ဆူးလေဘုရားပွဲလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးဗူးသီးကြော် ကြော်ရောင်းကြပါတယ် အဲ့ ဒါမျိုးတွေကို မြန်မာကောင်တွေကအငမ်းမရစားကြအားပေးကြပါတယ် အစားတစ်လုပ် အတွက်နဲ့ တိုင်း ပြည်ကို မွတ်ဆလင်လက်ထဲအပ်နေတဲ့ မျိုးမစစ် မြန်မာတွေပါ မွတ်ဆလင်တွေ ဘာဆိုင်ဖွင့် ဖွင့် ...မြန်မာတွေ ဟာ....အပြုံး မ ပျက် အားပေးကြပါတယ် မွတ်ဆလင် က လိမ်လည်း ...ခဏသာစိတ်ဆိုးကြပါတယ်.....
မွတ်ဆလင် က ဖင်ချ လွှတ်လိုက် လည်း..... အမှတ်သည်းခြေမရှိ ပဲ ......ဆီလူးပြီးချတာကို ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်နေတတ်တဲ့ ရိုးအလှတဲ့ မြန်မာတွေပါ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဈေးမ၀ယ်ခင် ဘုရားစင်လေးရှိမရှိတော့ လှမ်းကြည့် ကြပါ .....ကိုယ်ရွှေမြန်မာတို့ မွတ်ဆလင်ဆိုင် ဆိုရင်..... ဒံပေါက် ကနေစပြီး.......ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအထိ......ဘာဆိုဘာမှ မ၀ယ်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျား မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံပါ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကို မူဆလင်တွေကပိုက်ဆံရှိရုံလေးနဲ့ ပိုင်ခွင့်ရရောလား? မဟုတ် ပါ ဘူးမဖြစ်စေရပါဘူးမပြောပါနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတောင် တဖြည်းဖြည်းချင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်လွှတ်နေ ရ တာ......နောင်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ ပြောမနေပါနဲ့ …
မွတ်ဆလင်တွေ အင်အားကောင်းလာရင်.... မြန်မာတွေ ဘယ်လိုမှ ပြန်လှန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး မြန်မာလူမျိုးဆိုတာတစ်တိုင်းပြည်ထဲရှိတာပါ မွတ်ဆလင်တိုင်းပြည်တွေကအများ ကြီးပါ အချိန်လွန်မှ ဒီမွတ်ဆလင် ကိစ္စ ကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရပါလိမ့်မယ်…မြန်မာတွေ ဘယ်လိုမှ ပြန်လှန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး........ မြန်မာမတွေ အနေနဲ့လည်း ....၀က်သားတုပ်ထိုးကို ကြိုက် တယ်ဆိုရင် ......နောင်အနာဂတ်မှာ ၀က်သားတုပ်ထိုး စားချင်တဲ့ စိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင် ......မွတ်ဆလင်ဆိုင်ကဈေးမ ၀ယ်နဲ့ ...မွတ်ဆလင်ဆိုရင် အရောမ၀င်နဲ့… မွတ်ဆလင်များဟာကြောက်စရာမဟုတ် ......ပိုက်ဆံရှိ မွတ်ဆလင်များဟာအထင်ကြီးစရာမဟုတ် နေရာပေးစရာမဟုတ် ….ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကောင်တွေပါ မြန်မာတွေဟာစစ်တိုက် တော်တဲ့ လူမျိုးပါ…မြန်မာလူမျိုးတွေဟာသာကီမျိုးတွေပါ…. ဂျပန်တို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ နေနတ် ဘုရားအမျိုးနွယ်မျိုးဆိုတာနဲ့ ဘာမှကိုမဆိုင်တာပါ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာသာကီမျိုးတွေပါ။ သာကီမျိုးတွေ ဟာအမျိုးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ပြင်းတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ် ခုခေတ်ကျမှာမြန်မာတွေ လည်းဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မှန်းကိုမသိဘူး… ပိုက်ဆံရှိတာလေးနဲ့ တင် မွတ်ဆလင်ကိုအထင်ကြီးနေကြပြီ…. မွတ် ဆလင် တွေလက်ထဲမှာ .....ဘ၀ပျက်ကုန်တဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီး ပါ ......မြန်မာတွေ နင်းချေ ခံထားရတာတွေ .....တင်စီးခံထားရတာတွေ .....မတရားလုပ်ခံထားရတာတွေ ......အနှိမ်ခံနေရတာတွေ အများကြီးပါ မြန်မာတွေ ရဲ့ အလွန် အမင်းသီးခံတတ်မှုကြောင့် သာလူမသိသူမသိ ဖြစ်ကုန်ရတာပါ ဆော်ဒီမှာဘုရားတစ်ဆူတောင် တည်ခွင့်မရသေးဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဗလီတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှိုလိုပေါက် နေလိုက်တာ ဒါမြန်မာနိုင်ငံလား? ဆော်ဒီလား? မွတ်ဆလင်တွေ နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် သဘောထားကြီးပြနေစရာမလိုဘူးဘာမှ မေတ္တာထားနေစရာမလိုဘူး… ရန်ကုန်မှာဘုန်း ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း လှူဖို့ သာခက်ခဲနေတာဆောက်ရေးမပါတဲ့ ဗလီတွေကတော့ အလျှိုအလျှို ပေါ် လာနေတော့တာပါပဲ….
အောင်ဆန်းကွင်းလိုဘောလုံးကွင်းမှာတောင် ဆောက်ဗလီကပမာမခန့်နဲ့… မြန်မာအမျိုးသမီးများကိုဖျက်ဆီးနေသော မွတ်ဆလင်များက မြန်မာ့အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သတ် သည့် ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် စပွန်ဆာပေးလာနိုင်ချင်းမှာ ပွဲကျင်းပသူများ အသုံးမကျလွန်းသည်ကို ပြနေပါသည် စင်ပေါ်တွင် မြန်မာဝတ်စုံများဖြင့် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ တက်သစ်စမင်းသမီးလေးများ မင်းသမီးကြီးများ မော် ဒယ်များက show လျှောက်နေသည်ကို မွတ်ဆလင်မ်သူဌေးများက မျက်စိအရသာခံကြည့်နေကြချင်းကို သင်ဆိုရင် ရော လက်ခံနိုင်ပါသလား? ထိုသို့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများ နှင့်ပတ်သတ်သော ပွဲများ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော ပွဲများ တွင် show လျှောက်နေသောသူများ အနက် မွတ်ဆလင်သူဌေး များဖြင့် အိပ်ဖူးသော သူများ အမြောက် အများပါကြပါမည် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့သောပွဲများပြီးနောက် စပွန်ဆာပေးသော မွတ်ဆလင်မ်များဖြင့် ပါသွားသူ များလည်း အမြောက်အများရှိနိုင်ပါသည်
စပွန်ဆာမျက်နှာတစ်ခုထဲသာ ကြည့် ပြီး တိုင်းပြည်မျက်နှာမကြည့်သည့် ပွဲစီစဉ်သူ မြန်မာဇာတ်ပျက် လအယ်များကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ထိုမွတ်ဆလင်မ်များက မြန်မာ အမျိုးသားရေးဖြင့် ဆိုင်သည့် ပွဲများတွင် စပွန်ဆာပေးလာနေကြခြင်းမှာ အမြင် မတော် ဆင်တော် နှင့် ခလောက်ဖြစ်ပါသည် မြန်မာအမျိုးသားသူဌေး များ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလည်း စပွန်ဆာပေးနိုင်သည်သာ…ထိုသို့သော ပွဲများတွင် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များကို ဦးစားပေး စဉ်းစား ကာစပွန်ဆာ ရှာသင့်ပါသည် ချယ်ရီဦး father land များကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီများမှာလည်း ၇၈၆ ကုမ္ပဏီများ သာ ဖြစ်ပီး အများပြည်သူ ကွယ်ရာတွင် မြန်မာ အမျိုးသမီး လေးများကို ခြေတော်တင် ဖျက်ဆီးနေကြသူများမှာ လည်း ထိုကုမ္ပဏီများမှ မွတ်ဆလင်သူဌေးများသာ ဖြစ်ကြပါသည် တစ်ခါဆက်ဆံ ရာသက်ပန် လက်လန်စေရမည်ဆိုသလို မွတ်ဆလင်မ် များဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါက မွတ်ဆလင်မ်များထံမှ ပစ္စည်းများ ၀ယ်ပါက မိမိတို့ မြန်မာများမှာ အခံဘက်ကကြီး ဖြစ်ကြပါမည်
မွတ်ဆလင်မ်များထံက ဈေးဝယ်ခြင်းသည် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးနေကြချင်းပင်ဖြစ်ပါသည် တစ်ကျပ်တန်သော ပစ္စည်းကို သုံးကျပ်ဖြင့် ရောင်းပါမည် .....ဈေးဝယ်သူ ကိုယ်ရွှေမြန်မာက ဈေးဆစ်ပါက နှစ်ကျပ်ဖြင့် လျှော့ရောင်းလေဟန်ပြုပါမည် .....ထိုကြားထဲမှာ ထို ပစ္စည်းများမှာ အလုပ်မဖြစ်သော.... မသုံးလည်းရသော အသုံးမတဲ့ သော ပစ္စည်းများ ပင်ဖြစ်နေတတ်ပါသည် ထိုအရာများကို ဘုန်းကြီးများ၊ မြန်မာ နွားများက အားရပါးရ ၀ယ်ယူအားပေးကြ ပါသည် ထိုသို့ သော အသေးအဖွဲ များကြောင့်ပင် မြန်မာများ နာလံ မထူပြီးရင် နာလံမထူနိုင် ဖြစ်နေကြပါသည် ဒံပေါက် စားချင်သော စိတ်ကို အောင့်အီး လိုက်ပါက သင်ဘာဖြစ် သွား မည်နည်း ? သင်ဘာမှ မဖြစ်ပါ ။ သင်ဒံပေါက်စားမှ သာ သင့်သမီးများ သင့်ညီမများကို မွတ်ဆလင်က xိုးပြီး သင် သာ သေချင်းဆိုးဖြင့် သေရပေလိမ့်မည် ဒံပေါက်တွင် အချိုမှုန့် ....CP သန္ဓေပြောင်း မွေးမြူရေးကြက်.... ဟိုမုန်း ဆေးထိုးထားသော ကြက်.... ကိုဆိုလိုသည် စားအုန်ဆီ ဆိုးဆေး ....များဖြင့် ၀ါကျင်နေသည်ကို သင်တွေ့နိုင်ပါပေသည် သင်နှလုံးရောဂါ သွေးတိုးဖြစ်သော အခါ သင့် မိသားစုက သင့် အတွက် ဆေးကုသစရိတ်ကုန်ကျရပေ အုံးမည် ထိုအခါ အမျိုးသားစီးပွားရေးကို အရေးပေါ် ပြန်လည် မြင့်တင်ရမည် ငွေများ အလဟဿ ဖြစ်ကုန်ပါမည် သူတို့ဖောက်သော ဒံပေါက်ကို ပိုင်ရှင် မွတ်ဆလင်မ်များပင် မစားကြသည်ကို သတိမူကြပါ ဘုန်းကြီးများကလည်း အလှူတွင် ဒံပေါက် မကပ်မဖြစ်ကပ်ရမည်ဟု ပညတ်ထားခြင်းမရှိပါ ဘုန်းကြီးများ အနေ ဖြင့် ဒံပေါက် ကပ်ပါကလည်း ငြင်းပယ်ပါ ။ ဘုရားကိုယ်တိုင်က အလှူဆိုရင် ဒံပေါက် ပါကို ပါရမယ် ဟေ့ဟု မိန့် ကြားထားခြင်းမရှိပါ။ ဒံပေါက်ကို ရှောင်နိုင်ရင်ပင် မွတ်ဆလင်ဆိုင်များကို ရှောင်၍ ဈေးဝယ်နိုင်ရင်ပင် ဗုဒ္ဓသာ သနာ အဓွန့်ရှည်အောင် သင် သာ သနာပြုနေခြင်းပါပေ… နို့မဟုတ်ပါက အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်နေသလို .....တစ်ဖက်က သာသနာပြု တစ်ဖက်က မွတ်ဆလင်မ်တွေက မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲဖြင့် တိုင်းပြည်မှာ မွတ်ဆလင်များလက်တွင် လုံးပါးပါး တော့ ပေမည် လာခြင်းမကောင်းသော မုဒိမ်းကောင်မိုဟာမက်ဆိုသည့် သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းကြီး အတွက် နွားများ လည်ဖြတ်ခံနေရသည်မှာ ဖြစ်သင့်ပါသလား?
ဂွာတာမိုနိုတွင် တာလီဘန်မွတ်ဆလင်များကို အမေရိကန်များက ဖင်ချ နေသည်ကို အလာဟ်ဘာများတတ်နိုင်ပါသလည်း? လူကြမ်းက နတ်ကြမ်းမခံနိုင်စကားရှိသလို လူတစ်ကယ်ကြမ်းပါက တစ်ကယ်မရှိသော အလာဟ်လည်း ပြေးရမည်သာ… ဗလီဆိုသည်မှာ တစ်ကယ်ဖြိုပါက ပြိုသည်သာ… ၀က်သားမြင်ရင် ဟာရမ် ဖြစ်သည်ဆိုသည့် မွတ်ဆလင်မ်များ က လူမြင်ကွင်း တွင် နွားသတ်ဖို့ ဟန်ရေးပြနေခြင်းမှာ နွားသတ်နေခြင်းမှာ သင့်လျော်ပါသလား? မေတ္တာဖြင့်နေ သော ခရစ်ယာန်များ ဟိန္ဒူများ ဗုဒ္ဓဘာသာများ အတွက် ဆိုးရွားသော မြင်ကွင်းများဖြစ်ပါသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင်များက မွတ်ဆလင်အခွင့်အရေးကို လိုချင်ကြပါသည် ...ဟုတ်ပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗလီဆောက်ခွင့်ပေးထားသလိုမျိုး ဆော်ဒီတွင် ဘုရားတည်ခွင့်ရမည်လော? ဘာသာရေး ကျောင်း ဖွင့် ခွင့်ရမည်လော? မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမြင်ကွင်းတွင် မွတ်ဆလင်များ နွားသတ်ဖို့ အရေးဟန်ရေးပြနေကြသလို ဆော်ဒီတွင် နွားများကို ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲဖြင့် ဘေးမဲ့ လွှတ်ခွင့်ရမည်လော? တစ်ခုမှ မရနိုင်ပါ ....
ထိုမွတ်ဆလင်များနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး သာတူညီမျှမှုဆိုတာမရှိပါ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ တောင် ရောင့်တတ်ပြီး မွတ်ဆလင်များက အခွင့်ရေးတောင်ဆိုနေချင်ကြသည်မှာ တရားပါသလား? မြန်မာများ က အမှတ်သည်းခြေမရှိသောကြောင့် မွတ်ဆလင်များက ရောင့်တတ်လာကြပါသည် မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်ဆိုသလို တစ်ဖက်က နည်းနည်းလေး လှူပြ တစ်ဖက်က တိုင်းပြည်ကိုဖျက် လိင်ဖြင့်သာသနာပြုကြပါသည် သုံးပွင့်ဆိုင် လား လေးပွင့်ဆိုင်လားတော့ မသိ.....ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ကြသည်တဲ့ မြန်မာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက အ, လွန်းသည် ။ မေတ္တာထားလွန်းသည် ။ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ အချင်း ချင်း ပခုံးဖက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါသည် ။ ထို မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသော စာပြုသူက ပြုံးမိပါသည်။ ထိုမွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်က ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဘုန်းကြီးနဲ့ လက်ဆွဲ နှုတ် ဆက် ပခုံးဖက်မတတ်ရှိပါသည် ။ ထိုမွတ်ဆလင်ခေါင်ဆောင် ၏ပခုံးဖက်သော လက်သည် ......နောင်တစ်ချိန် သူတို့ အင်အားကြီးလာပါက ......ကျွန်တော်တို့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဘုန်းကြီးကို ခေါင်းဖြတ်မည်မှာ အသေ အချာပါပင်… မွတ်ဆလင်များသည် လူအင်အားနည်းပါးချိန်တွင် ၊ အခြေအနေအခွင့်အရေး အသာစီးမရသေးခင် ....မျက်နှာချိုသွေး လေပြေထိုးကာ.... ငြိမ်း ချမ်းရေးဟု တွင်တွင်ပြောပြီး ...... မူဆလင် အင်အားကြီးလာပါက လည်လှီးသတ်ဖို့ ၀န်လေးနေမည် မဟုတ်ပါ....မေတ္တာထားနေမည်မဟုတ်ပါ....တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ်ပါ…. ထိုအခါမှ နောင်တ ရနေကြပါက ဓမ္မပဒ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်တောင် ထပ်တိုးကောင်း တိုးလာနိုင်ပါသည် မွတ်ဆလင်များ အများအပြားနေထိုင် ကြီးစိုးရာ လမ်းများကို သင်ဖြတ်လျှောက်ဖူးပါသလား? တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ရင်လေး မှု၊ မွှန်း ကျပ်နေမှုကို သင်တွေ့ထိခံစားရပါမည် မြန်မာနိုင်တွင် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့ အငွေ့အသက်ပျောက်ကာ မွတ်ဆလင်နံ့များ ထောင်းလမောင်းထနေပါမည် ။ ရွံ့ရှာဖွယ် အတိဖြစ်နေပါမည်… တစ်ရက်သော အခါက မွတ်ဆလင်ရပ်ကွက်အတွင်း စာရေးသူ... စနည်းနာရန်ဖြတ်လျှောက်မိပါသည် ဗလီဘေးရှိ ရပ်ကွက် ရုံးတွင် မွတ်ဆလင်မိသားစုများ တက်နေသည်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးမိပါသည် ထိုရပ်ကွက် တွင်နေသော မြန်မာ မိသားစု အတွက် ဘယ်မှာ တရားမျှတမှု ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှု စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာ ရှိပေတော့ မည်နည်း….
တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း အဘာ အဘာ အလာ အလာ အော်နေသည်ကို နားမချမ်းသာဖွယ်ကြား ရ ပေတော့မည် ခွေးရူးနဲ့ ခွေးကောင် ဖက်မကိုက်ဟု ဆိုသကဲ့သို့ .....အတင်း နယ်ချဲ့ လာသော ခွေးရူး မွတ်ဆလင်များ ကြောင့် မြန်မာ လူမျိုးများမှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းရပါတော့သည် တစ်ချို့ ရပ်ကွက်များ လမ်း များတွက် မွတ်ဆလင်များကို အ၀င်မခံသည်များရှိပါသည် ထိုရပ်ကွက်များ လမ်းများမှ ခေါင်းဆောင်များ တာဝန်ရှိသူများကို စာရေးသူမှ ချီးကျူးပါသည် လေးစားပါသည် ဂုဏ်ပြုပါသည် ကျန်သော သူများလည်း အတုယူ သင့်ပါသည် မြို့ လယ်ခေါင်ရှိ လမ်းများတွင် ဓမ္မရုံများ ရှိနေခြင်းကို ချီးကျူးပါသည် လေးစားပါသည် ဂုဏ်ပြုပါသည် မဟုတ် ပါကလည်း ကျောက်တံတားမြို့ နယ်ကြီးသည် များမကြာမီ မွတ်ဆလင်မ်များ ကြီးစိုးရာ မြို့ နယ်ကြီးဖြစ်ပေ တော့မည် ညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်မိပါက မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်းကို ....ဂျင်းထဲ့နေ သော ....ဆနွင်းထဲ့နေသော ...မွတ်ဆလင်မ် ဆိုင်များ အများ အပြားကို တွေ့နေရပါသည် ဘယ်မျိုးမစစ် သက်ဆိုင်ရာလူကြီး များ ကြောင့် ဖွင့်ခွင့်ရနေသလည်းဆိုတာကိုတော့ မသိနိုင်ပါ ထိုသက်ဆိုင်ရာလူကြီး၏ သမီးများ အစ်မများ ညီမ များကို မွတ်ဆလင်များ ဖြင့် လက်ဆက်ပေးကာ စီးပွားဖက် လုပ်လိုက်ပါက ပိုကောင်းပေမည်…ဒါမှ တိုင်းပြည် လည်း ပျက်ပေမည် ရန်ကုန်မြို့ လည်တွင် မွတ်ဆလင်များသာ မရှိပါက ဘယ်လောက် အေးချမ်းသာယာ ပေလိုက်မည်နည်း… ကမ္ဘာပေါ်တွင် မေတ္တာထားလို့ မကောင်းဆုံး သတ္တ၀ါများမှာ မွတ်ဆလင် များသာဖြစ်ပါသည် သင်က သူတို့ အပေါ် မေတ္တာထားမိက ......သင့်မိန်းမကို ကြာခိုကာ ....သင့်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး .....သင့်ဇက်ကို ဓားဖြင့်လှီးကာ... သင့်ကို သတ်ပေမည် ကရ်ှမီးယား ၊ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ ချေချင်းညှာ၊ ကိုဆိုဗို၊ ဇင်ကျန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပါကစ္စတန် တို့ကို လေ့လာသင့်ပါသည် ဘာသာရေး ရဲများ မျိုးစောင့်တပ်များ တိုင်းပြည်တွင် လိုအပ်လာပါပြီ မွတ်ဆလင်မ်များ အကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ် ပျက်ခဲ့ သော အရာများကို ကြည့်ချင်းဖြစ်သိရှိနိုင်ပါသည်
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ကိုယ့်အားကို သာ ကိုယ်ကိုးရပါမည် လူမသိ သူမသိ မွတ်ဆလင်များ ၏ တင်စီးမှုကို ခံနေရသော မြန်မာများ အများအပြားပင်ရှိနေ မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည် မွတ်ဆလင်မ်များ၏ ခြေတော် အတင်ခံရသော မြန်မာ မလေးများလည်း အများ အပြားရှိမည် ဟုယုံကြည်မိပါသည် ထိုပြဿနာများ အားလုံကို ပြေလည်စေရန် ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးကြရပေမည် ဒံပေါက်ကို မစားပါနှင့် မွတ်ဆလင်ဆိုင်များ တွင် အလုပ်မလုပ်ပါနှင့် မွတ်ဆလင်များဖြင့် ကင်းကင်းနေပါ မနေပါက မွတ်ဆလင်မယားဖြစ်လိမ့်မည် မွတ်ဆလင်မယားဖြစ်ပါက ဘယ်လိုနေရမည် ကို ကြိုတင် သိကြပါ မွတ်ဆလင်မ်များကို စီးပွားရေးအရတန်ပြန် တိုက်စစ်ဆင်ကြပါ ယခုစာရေးနေချိန်တွင်ပင် မွတ်ဆလင်မ်များ သန်လျင်ကို သိမ်းပိုက်လိုက်ကြပြန်ပါပြီ…. မွတ်ဆလင်များ လက် အောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျရောက်နေသော မြို့ များမှ အများအပြားပါပင်… ထိုမြို့ များတွင် ဗုဒ္ဓ သာသနာ ထွန်းလင်းခွင့် တည်မြဲ ခွင့်ရှိမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား ၊ ? ထိုသို့ ထင်နေပါက သင်အရူးတစ်ယောက်သာဖြစ်ပေ မည် မြန်မာ အနုပညာရှင် ကောင်မ အများအပြားလည်း မွတ်ဆလင်များဖြင့် ကာမဆက်ဆံခြင်း ၊ အတူနေထိုင်ခြင်း များကို အရှင်ကင်းမဲ့စွာ အမျိုးသားရေစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့စွာ လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ် ကိုယ့် အ၀ှာနဲ့ ကိုယ်ခံတာပဲ ဟု ယုတ်မာအောက်တန်းကျစွာ ပြောလာပါက.... ကိုယ့်အ၀ှာနဲ့ ကိုယ် အ၀ှာတဲ့ ကောင်မများ ဆော်ဒီ သာ လိုက်သွားကြပါခင်ဗျားးး…. မြန်မာပြည်သည် ငါတို့ ပြည်
အမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုပီး မျိုးချစ်စိတ် မျိုးချစ်စိတ် ဆိုကာ ဖင်ဖြဲပြီး ကုန်းအော်နေလို့မရပါ အမျိုးကို တစ်ကယ်ချစ်ပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကာကွယ်ထားမှရပါမည် အခုရေတွင်းတူး အခု ရေကြည်သောက်ချင်လို့မရပါ
အခုချိန်ထိ တိုင်းပြည် ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရ ကောင်း မှန်းမသိသေးပါက… မွတ်ဆလင်များလက်ကို မိမိတို့ ၏ အဆက်ဆက်သော မျိုးဆက်များ ၏အသက်များကို ၀ကွက် အပ်ထားလိုက် ကြပါတော့… ကျောချတာတောင် မှ ဓားပြမှန်းမသိသေးသည့် နွားစိတ်ဝင်နေသည့် မြန်မာများခင်ဗျာ… မွတ်ဆလင်မ်ဆိုင်များကို သဲသဲ လှုပ် အားပေးနေသည့် .....နွားစိတ်ဝင်နေသူ မြန်မာများကို...... မွတ်ဆလင်များက လည်လှီးသတ်ရန် နေ့စဉ် ရက်ဆက် .....ခံတပ်ပမာ ဗလီများ တွင် .......မော်လ၀ီဆရာများက သင်ကြားပို့ချပေးနေသည်မှာ ကြာ လွန်ခဲ့လှပါပြီ…. တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မျိုးချစ်လူငယ်တွေ လက်ထဲမှာသာရှိတယ်… မြန်မာတွေ ယခုချိန်တွင် မွတ်ဆလင်များကို ချမည်ဆိုပါက မွတ်ဆလင် ၁ ယောက် မြန်မာ ၁၀ ယောက် ချလို့ ရပေမည် နောင်တစ်ချိန်တွင်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ တစ်ယောက် ကို မွတ်ဆလင် ဆယ်ယောက် က ၀ိုင်းချခံရပေလိမ့်မည်… မွတ်ဆလင် xီးမှ xီးထင်နေသော ငွေမျက်နှာတစ်ခုထဲကြည့် မြန်မာမများ ခုချိန်ထိ ဒံပေါက်စားနေဆဲ ၇၈၆ ကြက် ကြော် စားနေဆဲ မူဆလင်ဆိုင်မှာ အားပေးနေဆဲ မြန်မာနွားများ အမြင်မှန်ကိုသိကြပါစေ ၇၈၆ ဒံပေါက်ဖြင့် အလှူ လုပ်နေသော မြန်မာများ ....လည်လှီးခံဖို့ ......လည်စင်း၍ စောင့်နေကြလေ…. ၇၈၆ ဒံပေါက်ကို ဘုန်းပေးနေသော ဘုန်းတော်ကြီးများ ......လည်လှီးခံဖို့ ......လည်စင်း၍ စောင့်နေကြလေ…. မေတ္တာရှင် မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးများ.... ကျူးကျော်သူ မွတ်ဆလင်များကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေ၍ .......လည်လှီးခံ ဖို့ ........နေ့ကောင်းရက်သာ...ကို ......စောင့်ကြလေ…
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု ပါ ဘုရား
Copied from Aung Paing. မူရင်းရေးသားသူ အောင်ပိုင် ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Type the rest of your post here.
ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်ရ ၊ဘာမှန်းမသိသော ဟိုဟာလိုလိုကိုသာ ကိုးကွယ်ကြလော့
မက္ကာရောက်မွတ်ဆလင်လူငယ်တစ်ဦး “ငါကိုးကွယ်နေတာဟာ ဟိုဟာလိုလို(Hohalolo)ပုံကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လား” ဟု ယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းပက်လက်နောင်တရနေပုံ
သူတော်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ချိန်ထိုးသောအခါ ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား မေတ္တာဓါတ်စို မစို အားဖြင့် ချိန်ထိုးရသကဲ့သို့ ၊ ထို့အတူပင် အသိဥာဏ်ရှိ မရှိ ချိန်ထိုးသောအခါ ယုတ္တိကင်းမဲ့၍ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော အရာများကို ယုံ မယုံအားဖြင့် ချိန်ထိုးရပေသည် ။
မသင့်မတင့်ဖွယ် နှလုံးသွင်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်
ရဟန်းတို့ ၊ တစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် လောကတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော် ၊ လူအများ၏ အကျိုးစီးပွါးမဲ့ခြင်းငှာ ၊ လူအများ၏ ချမ်းသာမဲ့ခြင်းငှာ ၊ လူအများ၏ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ၊ နတ်လူတို့၏ ဆင်းရဲခြင်းငှာသာဖြစ်၏ ။ ထိုတစ်ယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် ၊ အဘယ်နည်းဟူမူ ဖောက်ပြန်သောအားဖြင့် မြင်တတ်သော ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တည်း ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် လူအများကို သူတော်ကောင်းတရားမှ ကင်းကွာစေ၍ မသူတော်တရားတွင် ၊ တည်စေ၏ ။
(အင်္ဂုတ္ထိုရ် ၊ ဧကနိပါတ် ၊ ၁၆ ဧက ဓမ္မပါဠိ ၊ ဒုတိယဝဂ္ဂ ၊ တတိယဝဂ္ဂ ၊ သံဂါယနာမေးဖြေ ။ စာ ၁၁၆ ။)
Haj Waxlee's Facebook
မကြာမီပင် ငါအရှင်မြတ်သည် မယုံမကြည် သွေဖည် ငြင်းပယ်သော သူတို့၏ စိတ် နှလုံးများ၌ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ခြင်း ကိုထည့်သွင်း ပေးတော်မူအံ့ ။
သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ လည်ကုပ်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြလေကုန် ။ ထိုနည်းတူစွာ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ လက်ချောင်းများ၏ အဆစ်များကို တစ်ခုစီ ဖြတ်တောက် ကြလေကုန်။
1.Islamic Violent Jihad
2.Islamic Demographic Jihad
3.Islamic Institutional Jihad
4.Islamic Cultural Jihad
5.Islamic Economic Jihad
6.Islamic Education Jihad
7.Islamic Media Propaganda Jihad
9.Drug distribution Jihad
ဦးဝိရသူမေးတဲ့စာ ၊ ကိုကိုမွတ်များဖြေပေးပါ
ဦးပဉ္စင်းသည် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးတရား ဟောကြားနေသူမဟုတ်ပါ။ အစ္စလာမ်သာသနာကို မဆန့်ကျင်သလို ကိုရ်အန်ကျမ်းကိုလည်း လေးစားပါသည်။ (၂၀၀၁၊ ၂၀...
သက်တန့်ချို (ဘာသာပြန်ဆိုသူ) (အီးမေလ်ကနေ ရလာတဲ့ ဒေါက်တာ Tawfik Hamid ရဲ့ From the heart ofaMuslim ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါတယ်။) ကျွန...
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကိုရမ်ကျမ်းမြတ်မဟာ ဖြစ်စဉ်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကိုရမ်ကျမ်းမြတ်မဟာ ဖြစ်စဉ် ဟာဂျီဝက်စ်လီ စုဆောင်းတင်ပြသည် ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းဟာ ဘယ်နေရာမှာ ဆုံးမှန်းမသိရှာတာပါပဲ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြ...
မိတ္ထီလာမြို့ ကုလား-ဗမာ အရေးအခင်းဖြစ်စဉ်ကြီးထွားသွားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခု
၂၀-၃-၂၀၁၃-ညနေ ငါးနာရီခန့်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရရှာသော ဦးပဉ္စင်းကြီး ဦးသောဘိတသည် သာစည်မြို့နယ်၊ ဟံဇားအုပ်စု၊ ဟံဇားကျေးရွာ၊ မိုးကောင်းကျောင်းတိုက်မှာ သ...
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ကိုမုန်းတီးနေတယ်လို့ပြော ချင်တဲ့လူတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။ ဒီဗုဒ်ဓဘာသာ၊ ဂျုးဘာသာဝင်၊ခ...
မင်္ဂလာဆောင် အသွင်းကြေးကို မပေးဆပ်နိုင်၍ ဧပြီလအတွင်း မူဆလင် အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရ
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံတွင် ၊ မူဆလင် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ အိမ်ထောင်ပြုစဉ် အမျိုးသမီးများဘက်က လင်ယောင်္ကျား ဖြစ်သူများထံ ပေးဆောင်ရမည့် အသွင်း ကြေးငွေမျာ...
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်များကို ကြက်ချေးဖြင့် သုတ်ပြီး ပြဿနာရှာသူဘယ်သူလဲ
လတ်တလော မွတ်ဆလင်ကုလား တို့ ပြဿ . နာ အကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ခြင်း
လတ်တလော မွတ်ဆလင်ကုလား တို့ ပြဿ . နာ အကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ခြင်း မန္တလေးမှာ ဓါးတွေလှံတွေ လေးခွတွေနဲ့ ဓါးကာအင်္ကျီတွေ မိတာ နဲ့ ရန...
အလ္လာဟ်ရှင်အစီအစဉ်အရ ၊ ရိုဟင်ညာတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံကြဘူးလို့ ထိုင်းအစိုးရပြောပြီ
2013-06-04 ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲက ရိုဟင်ညာတွေကို ဘယ်တတိယနိုင်ငံကမှ လက်မခံလိုကြဘူးလို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွ...
Read More နှိပ်မရလျင် သတိပြုစရာ
Read More ကို နှိပ်ပြီး ဖတ်၍မရပါက ၊ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို ကလစ်ပြီး ဖတ်ပါ ။
မူဆလင်အကြံ ၊ တို့လက်မခံ
Arakan Coral News
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ စာအုပ်ငယ်ကို စာရှုသူများ ရှင်းလင်းပီသစွာ ဖန်ရှုနိုင်ကြစေရန် ၊ ပို့စ်အဖြစ် ဖန်တီးလွင့်တင်ထားပါသည် ။ ဖတ်ရှုလိုပါက ဤနေရာနှိပ်ပါ
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ၊ ရခိုင့်ချေပချက်
သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက်အရ ၊ အောက်ပါပို့စ်တို့ကို
ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည် -
- ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ခရီးသွားမှတ်တမ်း
- တော်ပါပြီ ၊ နေပါတော့ ဝက်သား ။ သည်တစ်ခါ...
- ငရဲကြီးမှာ မကြောက်ရတဲ့ဆေး
- ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရေး
- စကြ်ာဝဠာဖန်ဆင်း ထုတ်လုပ်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
- စကြ်ာဝဠာမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အမှုအခင်းများ
- အမတဘုံဖွင့်ပွဲ (သတင်းမြင်ကွင်းကျယ်)
- မီးရှူးတိုင်ကြီး အသစ်လဲလှယ်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
- လူသားဖန်ဆင်းရှင်များ ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ဥပဒေ
- အမတဘုံမှ အမှုအခင်းများ- စသည်စသည်……
ဘလော့ကြွလာ မိတ်သဟာများခင်ဗျာ ။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်မြတ်အကြောင်း မြန်မာအများ သေခြာစေ့ငုစွာ သဘောပေါက် သိရှိစေရေး အတွက်လည်းကောင်း ၊မြန်မာ့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်နေစေရေး အတွက်လည်းကောင်း ၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဤကမ္ဘာမြေမှ ပပျောက်ရေးအတွက်လည်းကောင်း ၊ ဤ ဘလော့ လိပ်စာအား အခြားမိတ်ဆွေများသို့ လက်ဆင့်ကမ်း အသိပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ။
မူဆလိင် ညီအစ်ကိုများ သတိပြုရန်
ဤ မဟာစကြာဝဠာအပြားကြီးတွင် အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဆန္ဒတော်မပါဘဲ ဖြစ်နေသောအရာဟူ၍ မရှိပါ ။
ဤ ဘလော့သည်လည်း အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဆန္ဒတော်နှင့်အညီ ထူထောင်ထားမူသော ဘလော့ ဖြစ်ပါသည် ။
သို့ပါ၍ ဘလော့ပိုင်ရှင်များကို ဆဲဆိုခြင်းသည် အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကို ဆဲဆိုသည်နှင့် အတူတူဖြစ်ပါသဖြင့် ၊ အနော်တို့ မူဆလိင် ညီအစ်ကိုများ သည် ၊ ဤ ဘလော့ပိုင်ရှင်များကို ဆဲဆိုခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည် ။
ဤလောကကို တစ်စုံတစ်ဦးက ဖန်ဆင်းထားသည် ဆိုငြားအံ့ ။ ထို့ပြင် ဤလောကကို ထို ဖန်ဆင်းရှင်က စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းကျောင်း ပြဋ္ဌာန်း နေသည်ဆိုငြားအံ့ ။ ဤလောကသားတို့ တွေ့ကြုံ ခံစားနေကြရသည့် ဒုက္ခနှင့် ဘေးအဖုံဖုံတို့သည်လည်း ထိုဖန်ဆင်းရှင်၏ လက်ချက်သာ ဖြစ်ရပေလိမ့်မည် ။ သို့ဆိုလျင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုသည်မှာ မရှိ ၊ ဖန်ဆင်းရှင် ဘေးအန္တရာယ်သာ ရှိရပေလိမ့်မည် ။ ထိုသို့ အကြင်နာ မေတ္တာတရား ကင်းမဲ့ပြီး စဉ်းလဲယုတ်မာကောက်ကျစ်သော ဖန်ဆင်းရှင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည်ညို လေးစားသင့်ပါ၏လော ၊ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ် သင့်ပါ၏လော ။ (Senior Allah)